Ingabe i-SEO Case Study isithuluzi esihle sokuthengisa?
Ngokwezibalo, amakhasimende angaphezu kuka-90% akhetha ukuthi umlayezo wezindaba uzwakala njengendaba. Kwafakazelwa ukuthi indaba ekholisayo ibasiza abantu ukuba baqonde inkinga ethize kangcono. Akunakuphika ukuthi ngisho nabantu abadala bakuthola ukukhululeka lapho wonke umuntu ephila ngokujabula njalo.
Ucwaningo lwesifundo se-SEO iyithuluzi elikhulu lokumaketha. Namuhla, ochwepheshe be-Semalt bayokutshela kabanzi ngesisombululo esilandelayo. Ngemva kokufunda lesi sihloko, uzokwazi ukuthi ungafaka kanjani izifundo zokwenza ucwaningo ukuze uhwebe ibhizinisi lakho. Ucwaningo lwesifundo ithuluzi elinamandla elingakusiza ukwandisa inkinga yeklayenti ngokuchaza ukuthi ibhizinisi lakho lingakwazi kanjani ukubhekana nezidingo zamakhasimende wakho?
. Ucwaningo lwamacala luyindlela ephelele kulabo abanikazi bewebhusayithi abanomgomo wabo oyinhloko ukwenza abantu bathenge imikhiqizo namasevisi abo. Okwenza ucwaningo lwezehlakalo lube lukhethekile indlela abaxubanisa ngayo ukuxoxa ngezindaba ngolwazi mayelana nebhizinisi lakho.
Yisiphi Isizathu Esiyinhloko Sokusebenzisa Ucwaningo Lwesifundo ku-SEO?
ISifundo Se-SEO Isifundo Ithuluzi Eliphumelelayo Lokusakaza
Abathengi abaningi be-intanethi basikisela ukushicilela ucwaningo lwezifundo kumawebhusayithi. Noma kunjalo, ungaqhubeka futhi uhambise iphephandaba noma umagazini wendawo ukuheha amakhasimende amaningi. Enye indlela enhle yokwakha idumela lakho ukuveza ucwaningo lwakho lwamacala kwezinye izinsiza ezizinikezelwe embonini yakho.
Futhi, cabangela amaqembu e-LinkedIn aqondene nemboni. Ziphelele ukwabelana ngokuhlangenwe nakho kwakho nabanye abantu. Njengoba isisho siya, ukwabelana kunakekela. Yenza abantu bazizwe bekhethekile ngokubanika ulwazi olukhululekile nolusizo lwakho.
Ungakwazi ukushicilela ngokukhululekile izifundo zakho zamacala ku-LinkedIn Pulse. Isiteji sesayithi sivumela abasebenzisi ukuthi bazishicilele izihloko ezingabelwa ngazo. Umqondo owodwa owodwa kakhulu we-SEO yakho ukulungisa kabusha isifundo se-case esivela kwisethulo se-slide noma ku-infographic ukwabelana. Ngemuva kokuthi usuqedile, ungabelana ngawo kuma-akhawunti wakho wezokuxhumana.
Kufanelekile ukuphawula ukuthi ungasebenzisa ucwaningo lwakho lwamacala njengemininingwane yolwazi ukuze uthumele amaklayenti angenzeka futhi angamanje.
Ukwakhiwa kwesifundo se-SEO Case
Okufanelekile, isifundo sakho secala kufanele sibe nesiqalo, esiphakathi, futhi siphele. Khumbula, lezo zifundo zesikhashana zivame ukuhlala isikhathi eside futhi ngokujulile kunezindaba ezivusa amadlingozi. Ngakho-ke, ukuhlela kahle kuyisihluthulelo. Ngesikhathi esilandelayo lapho ubhala isifundo secala, qinisekisa ukuthi kufaka phakathi izingxenye ezilandelayo:
isihloko esifushane nesibambekayo;
Ukubuka ngokujulile inkinga abazobhekana namakhasimende;
Incazelo yokuthi ibhizinisi lakho likhuluma kanjani nezindaba zenkampani;
Ubufakazi obonisa ukuthi isevisi yakho noma umkhiqizo wakho usize kanjani iklayenti;
Shayela esenzweni esilandela emuva kumkhiqizo noma isevisi yakho.
Kungcono kuwe ukuthi yisiphi isitayela okufanele ukhethe lapho udala isifundo secala. Okubalulekile ukukhumbula ukuthi ukutadisha kwakho icala kumele kudalwe indaba emayelana nokuxazulula ukuphela.
Ukufingqa, ukutadisha icala kuyithuluzi elinamandla elingathuthukisa i-SEO yakho ngezindlela eziningi. Ucwaningo lwezehlakalo lusiza abathengi abaningi abakuyo ngokunikeza ngokujulile ukuthi kunjani ukusebenzisana nemisebenzi noma umkhiqizo wakho.
Siyakuhalalisela! Manje uyazi izinto eziyisisekelo zokwakha ucwaningo oluphoqelela icala. Mhlawumbe, yisikhathi esiphezulu sokutshela indaba eyakho Source .